Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Russia » I-Russia izovimbela ukuthengiswa, ukumba izimayini kanye nokusatshalaliswa kwama-cryptocurrencies
Amazwe ayisishiyagalolunye, kuhlanganise ne-China, avimbele i-cryptocurrency ngokuphelele, kanti amanye angu-42 afake imingcele eyenza kube nzima kakhulu ukuyisebenzisa.
The IBhange Elikhulu LaseRussian Federation (Ibhange LaseRussia) ikhiphe isitatimende namuhla, iphakamisa ukuvinjelwa okuphelele kokudayiswa, ukumba kanye nokusatshalaliswa kwe cryptocurrencies eRussia.
Esitatimendeni, i- Ibhange LaseRussia yathi “isimo se-ruble yaseRussia, okungeyona imali egciniwe, asivumeli iRussia ukuba ithathe isinyathelo esithambile noma izishaye indiva izingozi ezikhulayo.”
Ngokusho the Ibhange LaseRussia izikhulu, umnyakazo omkhulu uzovikela umnotho waseRussia ezingozini ezihlobene zezimali zedijithali.
Ngokubona kwezikhulu, “kunconyelwa izindlela ezengeziwe.” Umlawuli uphakamise isiqephu semikhawulo athe “izonciphisa izinsongo ezihlobene nokusabalala kwayo cryptocurrencies,” okuhlanganisa ukuvimbela ukuthengiselana emakethe yaseRussia, ukwenqabela ukukhishwa kwezinhlelo zedijithali, nokuvimbela izikhungo zezezimali ekutshaleni imali kuzo.
Ngaphezu kwalokho, ukumbiwa kwama-cryptocurrencies kuzovinjelwa ngaphansi koshintsho lomthetho ohlongozwayo, njengoba bekungaba namandla okuba abatshalizimali bakhiphe imali. Labo abaphula imithetho bangabhekana nokushushiswa.
NgoNovemba 2021, i Ibhange LaseRussia ibike ukuthi ilinganiselwa ku-$5 billion crypto ithengiswa eRussia unyaka ngamunye, okwenza izwe libe ngelinye labadlali abakhulu emakethe esafufusa emhlabeni wonke.
Izikhulu zathi iRussia yayingeyesibili eTurkey ngokuya ngabasebenzisi abavakashela iBinance cryptocurrency ukushintshana ku-inthanethi.
Ngaphezu kwalokho, izwe libeka isithathu, ngemuva kwe-US ne-Kazakhstan, ezimayini ze-bitcoin emhlabeni jikelele.
Ngokwemibiko yakamuva, i- Ibhange LaseRussia Ubuye wathintwe abeFederal Security Service (FSB) yaseRussia mayelana nokukhathazeka ngalokho cryptocurrency ibisetshenziselwa ukuxhasa ngezimali imithombo yezindaba kanye nezinhlangano zezepolitiki eziqokwe 'njengabenzeli bangaphandle' ngezixhumanisi zemali evela phesheya kwezilwandle.
Ngokusho kwemithombo emibili engaziwa, i-ejensi yezokuphepha yancoma ukuvalwa okuphelele kwemisebenzi ye-crypto eRussia, ngokuhambisana nezincomo ibhange elanyatheliswa kamuva.
Ngaphandle komphumela okuthiwa i-crypto ezimakethe zezimali, ibhange liphinde lakhuluma ngokukhathazeka mayelana nomthelela wohlobo lwemali endaweni esinqumweni salo, lithi ukusabalala kwayo kungaba nomthelela omubi emizamweni yokwamukela izinhlelo zamandla esimeme. Ngo-2021, ukuhlaziywa kubonise ukuthi i-bitcoin isebenzisa ugesi omningi ngonyaka kunesizwe saseFinland njengengxenye yenqubo yezimayini.
I-China yaba sematheni ngonyaka odlule lapho ivala i-cryptocurrency ochungechungeni lokuqhekeka, iqala ukwenqabela izikhungo zezezimali ukuthi zihlanganyele ekuhwebeni kwe-crypto, bese ivala izimayini zasekhaya, futhi ekugcineni ivimbele ubuchwepheshe ngokuqondile ngoSepthemba. Uhulumeni uthe ukhathazekile ngemiphumela yemali yemvelo, futhi isetshenziselwe ukukhwabanisa nokushushumbisa imali, njengoba ingadayiswa ngokungaziwa nangaphandle kwezinhlelo zezezimali zombuso. Izwe lalikade liyindawo ethandwa kakhulu yezimayini ze-bitcoin, kodwa yathathelwa indawo yi-US ngemva kokuvinjelwa.
Amazwe ayisishiyagalolunye, kuhlanganise ne-China, avimbele i-cryptocurrency ngokuphelele, kanti amanye angu-42 afake imingcele eyenza kube nzima kakhulu ukuyisebenzisa. Inani lamazwe neziphathimandla ezivimbe i-crypto, ngokuphelele noma ngokungagunci, seliphindeke ngaphezu kokuphindwe kabili kusukela ngo-2018.
Bank Finland Russia igalikuni
Imakethe Yokubhaliswa Kwabantu Abadala Kulindelwe...
Ukuphazamiseka Kwemizwa Kuphusha Ukuvuselela Ubuchopho Okujulile...
Ukukhuphuka Kwemakethe Kwezidakamizwa Ezilwa Namagciwane Ngenxa yemishanguzo emisha
Ukujabulela Ukhula Ehlane